MA LAGA YAABA AMMA SUURTOGAL MA NOQONKARTA IN BEELAHA GABOOYE EE REER SOMALILAND AY INAGA SOO DACWEEYAAN MAXKAMADDA CAALAMIGA AH EE HEGUE | Gaaroodi News
Waxa wiiggii hore ka qabsoomay magaaladan Hargeysa kuna soo gaba-gaboobay shir beeleed balaadhan, oo ay beelaha Gabooye ku qabsadeen. Shirkaasi oo ay ka soo qeyb-galeen boqorro, salaadiin, cuqaal, aqoonyahan iyo masuuliyiin kale oo beeshaasi ka mid ah, waxaanay ka kala yimaaddeen dhammaan goboladda somaliland. Gaba-gabadii shirkaasi waxay ka soo saareen baaq ku wajahan madaxweynaha Somaliland, golayaashaa sharci dajinta iyo shacbi weynaha reer Somaliland. Ujeeddada ugu weyn ee baaqaasi wuxuu ahaa, inay soo bandhigaan xaqiiqooyinka jira marka laga hadlayo dhinaca saami-qeybsiga beelaha reer Somaliland. Taasi oo ay muddo quul-darraynayeen inay helaan saamiga ay xaqa ugu leeyihiin xilalka siyaasadda iyo horumarinta bulshada guud ahaan. Waxaanay si toos ah u dalbadeen in laga siiyo saami kooto ugu xidhan golayaasha qaranka sida wakiiladda, guurtida iyo golayaasha deegaanka. Sidoo kale, waxay dalbadeen in wax laga qabto baahiyo ay qabaan oo dhinaca noloshooda aas-aasiga ah khuseeya oo dibu dhac ku keenay.
Barwaaqo,kuna heesha midhihii ka mid heestii jeclaa ee uu abuuray Abwaan Hassan Sheekh Muumin Alle ha u naxariistee ee Hibo nuura ku luuqeyn jirtay ee aheyd“Hadimada mar uun buu Rabi iiga hiilin”
Fiiro gaar ah: waxaad maqaalo badan oo aan qaddiyadan ka qoray laga helayaa internetka. Waxaana ka mid ahaa maqaaladaas ‘Naga Guura Amma Naga Guursada’oo aheyd Riwaayad uu sameeyay Alleh ha u naxriistee Abdikariim shabaash . iyo qoraal kale ooay ka mid ahayen“soleygii Macaana ee dumar gabooyahu iibin jiran oo beeshodii caanka ku aheyd illa aakhirkii 1970 aadkii iyo iyagii cirka kagu salooshay”. talooyin badan oo aan u jeediyey madaxda Somaliland oo arrintan khuseeya. Ciddii talo ka dhiibanaysa way ila soo xidhiidhi kartaa.